» प्रेम विवाह गरेको ३ दिनमै आफ्नै दाईले जङ्गलमा लगेर यसरी सकुन्तलाको ज्यान लिए, आखिर किन यस्तो गरे त ? प्रेम विवाह गरेको ३ दिनमै आफ्नै दाईले जङ्गलमा लगेर यसरी सकुन्तलाको ज्यान लिए, आखिर किन यस्तो गरे त ? – हाम्रो खबर
प्रेम विवाह गरेको ३ दिनमै आफ्नै दाईले जङ्गलमा लगेर यसरी सकुन्तलाको ज्यान लिए, आखिर किन यस्तो गरे त ?
2020, December 24th, Thursday
admin 1070 Views
करिब सात वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकी सकुुन्तलाले शुक्रबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडाका २६ वर्षीय दिनेश कटवालसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको तीन दिनपछि सोमबार दाजुु सञ्जीवले बहिनी सकुुन्तलाको घरैबाट उनलाई जङ्गलमा लगेर ज्या’न लिएको खुल्न आएको हो ।